“Wakhtigii aanu lahayn ‘Ha Tahriibina KULMIYAA imane’ Xinif, Cali Mareexaan iyo Xirsi-gan Siyaasiga weyn noqday dhallinyarada joogtay bay ahaayeen…..” | Maalmahanews
“Wakhtigii aanu lahayn ‘Ha Tahriibina KULMIYAA imane’ Xinif, Cali Mareexaan iyo Xirsi-gan Siyaasiga weyn noqday dhallinyarada joogtay bay ahaayeen…..”
“Soddon Sannadood ka hor ayaan is garab taagay Siilaanyo oo ka soo horjeedsaday Dulmigii Siyaad Barre, isaguna Waakaa Maanta Madaxweynaha ii sharraxay…” Muuse Biixi Cabdi
Guddoomiyaha Xisbiga Muxaafidka ah ee KULMIYE Muuse Biixi Cabdi, ayaa Shalay lagu soo dhaweeyay Magaalada Burco ee Xarunta Gobolka Togdheer.
Muuse Biixi oo ah Musharraxa Madaxweynaha ee Xisbigaas uga qayb-galaya doorashada Madaxtooyada ee la qorsheeyay inay Sannadka dambe horaantiisa Dalka ka dhaco, ayaa hadal kooban oo uu u jeediyay Dadweynihii soo dhaweeyay ku sheegay in sababta uu Madaxwayne Siilaanyo ugu codeeyay Musharranimadiisa Madaxweynuhu tahay abaal uu afarta sannadood ka hor u galay.
Muuse Biixi oo arrimahaa ka hadlaya ayaa yidhi,
“Doorashadaa diwaangelinteedu bilaabantay codkeeda aad i siiseen aad baan idiinka Mahad-naqayaa, waayo? Golihii dhexe dhammaan Dadkii idin matalayey codkii aniga ayay i siiyeen oo Raggii aanu tartamaynay way iga reebeen oo sidii aad soo farteen bay fuliyeen, xitaa intii Buuhoodle ka socotay codka Aniga ayay I siiyeen, markaa waxay ka dhigan tahay way ii codeeyeen Reer Togdheer, ta kalena marka Codka lagu ridayo ayaynu ku saxeexi doonaa.”
Guddoomiye Muuse oo sii hadlaya, ayaa sheegay,
“Anigu Soddon Sannadood ka hor aniga oo idinka (Dhallinyarada) idin leeg ayaan is garab taagay Siilaanyo oo markaa ka soo horjeedsaday Dulmigii Siyaad Barre, Soddonkaa Sanadood ee aanu daba soconay ka dib, waakaa Maanta Madaxweynaha ii sharraxay ee isagu Gacanta ii taagay. Siyaasaddu marka Mabda’ la isku aamino taasi ayay leedahay” ayuu yidhi, waxaanu intaa ku daray in Siyaasiyiinta uu Xirsi ka mid yahay ay ka faa’ideen KULMIYE, “Wakhtigii aanu lahayn ‘Ha Tahriibin KULMIYAA imane’ Xinif iyo Cali Mareexaan iyo Xirsi-gaa Siyaasiga weyn noqday dhallinyarada joogtay bay ahaayeen, markaa haddaad Xisbigaaga aaminto sidaas ayaa Siyaasi weyn loogu noqdaa oo Magac iyo Maamuus baa lagu yeeshaa.”